Biodiversity Vision - Biodiversity Extinction IG
Mbibi nkpuru ndu
Ihe di iche-iche di iche-iche nari aka na umu aka anyi n’uwa nile na obodo anyi. Nke a gụnyere anụmanụ, ahịhịa, fungi, nje na algae.
N'ihi omume nke ụmụ mmadụ, ụdị dị iche iche nke ụmụ mmadụ na-agbadata ngwa ngwa n'akụkụ ụwa niile, nke mere na mmadụ nwere ike ilele ya anya dị ka ihe mkpochapụ. Ihe kachasị ama ama na ngbachapụ ụbọchị bụ mgbe dinosaurs nwụrụ. Enwere ike ịrụ ụka na ụdị ihe dị iche iche ga - emecha nwetaghachị n'otu ụdị ma ọ bụ ihe ọzọ dị ka ọ mere mgbe mkpochapụ nke dinosaurs, mana nke a nwere ike iwe ogologo oge ma enwere ike ọ bụghị tupu ụdị mmadụ n'onwe ya ekpochapụrụ.
Anyị ji ya ụgwọ n'ọgbọ anyị dị n'ihu iji kwụsị ịkwụsị ngwa ngwa ihe ọmụmụ a. Withoutwa na-enweghị ụdị dị iche iche na-agwụ ike, ọ nwedịrị ike itinye ndụ anyị egwu. Enwere ike ịrụ ụka na ọrịa Coronavirus Covid19 bụ nsonaazụ nke mmebi iwu anyị na-abawanye na okike.
Ugbu a enwere mbelata ngwa ngwa n'ọtụtụ ụdị ndụ. Habitat nke na-ewe ogologo oge ịlaghachị na-efu. Ọdịiche nke nnụnụ, azụ, nke nru ububa na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-agbada n'ike n'ike. A ga-ekwukwa otu ihe ahụ maka ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche na anụmanụ dị iche iche, gụnyere primates na ọbụna anụmanụ ndị nwe ya.
N'oge na-adịbeghị anya, enwere nnukwu nlebara anya na mgbanwe ihu igwe. Na agbanyeghị na agbanyeghị okwu na teknụzụ ndị ọhụrụ ka ejiri rụọ ọrụ kachasị ike maka ị nweta ike, njikọ ụwa dum jikọtara ọnụ na ikuku na-adalata ma yabụ ọgụ anyị megide mgbanwe ihu igwe anaghị enwe ihe ịga nke ọma. Otu ihe kpatara nke a bụ na mbara ala ndị mmadụ na-abawanye na oriri onye ọ bụla na-arị elu.
Mgbanwe ihu igwe bu otu n’ime ihe na emetuta ndi mmadu di iche-iche. Na mbuso agha ọgụ maka mgbanwe ihu igwe anyị chọrọ Plan B ma ọ bụ opekata mpe ụzọ ọzọ iji chekwaa ihe dị iche iche. Nke ahụ bụ isiokwu anyị.
E nwere òtù ndị ọzọ nọ ebe ahụ na-arụ ọrụ dị mma, a na-emeri ọgụ ụfọdụ mana agha a na-alụ na-agha agha dị iche iche. Anyị chọrọ ịgbanwe nke ahụ.
Ezigbo atụmatụ anyị
igosi ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mmadụ chọrọ ezigbo nsonaazụ na
ka ya na ndị sayensị na ndị ọrụ ndị ọzọ rụkọọ ọrụ iji wee bido n'isi ụdị ndu dị iche iche.
I nwere ike inyere anyị aka ime ka ọhụụ anyị mezuo site n’ịgbasa okwu ahụ. Nke ahụ bụ site na ịkekọrịta njikọ anyị na ịgba ndị mmadụ ume ikwupụta nkwado ha site na isonye (ọbụlagodi na nke ahụ bụ ihe ha na-eme) na / ma ọ bụ site na inye aka na / ma ọ bụ inye onyinye.